तीज र नेपाली नारी – Chitwan Post
तीज र नेपाली नारी
तीज धेरै हिन्दु चाडपर्वहरुका लागि सामान्य नाम हो, जुन मुख्यतया नेपाल र उत्तर भारतमा महिलाहरुले मनाउँछन् । हरतालिका तीजले मनसुनकोे स्वागत गर्छ । यस चाडमा मुख्यतया केटी र महिलाहरुद्वारा गीत, नृत्य गर्दै शिव–पार्वतीको प्रार्थना र अनुष्ठान गर्दै मनाइन्छ । यस चाडमा महिलाहरु रंगीन पोसाकको प्रयोग गर्दछन्, जसमा सबैभन्दा धेरै रातो रंगको प्रयोग गर्दछन्, किनकि रातो रंगलाई प्रेमको प्रतीक मानिन्छ । यो चाड प्र्रायः भदौ महिनामा पर्दछ ।
‘तीज’ ले ‘तेस्रो’ दिनलाई जनाउँछ, जुन प्रत्येक महिना नयाँ चन्द्रमा (औँसी) पछि आउँछ, र तेस्रो दिन हरेक महिनाको पूर्णिमाको रातपछि हरितालिका (तीज) पर्दछ । तीजमा गतिविधि, बादल र वर्षा, हरियाली र चरा तथा चराहरुको सामाजिक गतिविधि, आफ्नो पारिवारिक पीडा एवम् सामाजिक विकृति एवम् विसङ्गतिलाई गीत र नाचको माध्यमबाट व्यक्त गर्दै अनुष्ठान गर्दै मनाउँछन् । यो चाडमा महिलाहरुले विशेषतः शिव र पार्वतीमा समर्पित गर्दै आफ्ना दुःख, वेदना, विकृति र विसङ्तिलाई उजागर गर्दै मनाउँछन् ।
तीज पर्वमा महिलाहरु माइत जाने चलन कसरी सुरू भयो ? आज यो पर्वमा आएको परिवर्तन तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ? यो चाड मनाउँदा महिलाहरु कुन–कुन कुरामा सचेत हुनुपर्दछ ? यही सेरोफेरोमा यो लेख केन्द्रित छ ।
समादरणीय हिन्दु धर्मावलम्बी दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु, हाम्रा बाबाआमाले भन्नुहुन्थ्यो– “पहिले धार्मिक युग थियो, अहिले पापी युग आयो ।’ तर, म यस मानेमा भने पटक्कै समर्थन गर्दिनँ । म भन्छु, उहिले पापी युग थियो । सो समयमा छोरी–बुहारीहरुलाई असाध्यै हेलाँ तथा नकारात्मक दृष्टिले हेरिन्थ्यो । उनीहरुलाई शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सबैखाले शोषण हुँदा पनि उनीहरुमा चुँसम्म पनि बोल्ने अधिकार थियो न त साहस नै ।
नढाँटी सत्य बोल्नुपर्दा हामी नेपाली त्यसमा पनि ब्राह्मण, क्षेत्री परिवारमा त्यस्तो ज्यादती बढी मात्रामा थियो र अहिले पनि अन्य जातजातिको भन्दा बढी नै रहेको देखिन्छ । महिलाहरुले राति नै उठेर पानी भर्न पँधेरोमा जानु, घर लिपपोत गर्नु, घाँस–दाउरा गर्नु, खाना पकाउनु, जुठो भाँडा माझ्नु, बचेखुचेको खाना खानु, खाना नबचे भोकै बस्नु, सासू–नन्द–आमाजूको खुट्टामा तेल लगाउनु, लोग्नेको चाकरी गर्नु, सन्तान जन्माउनुजस्ता कार्य गर्नुपर्छ । घरपरिवारको लगभग सम्पूर्ण कार्य गर्नुका साथै सबैको चाकरी गर्दा पनि उनीहरुलाई दासीको जस्तो नीरस जीवन जिउन बाध्य पारिन्छ । यस्तो सहनु वा व्यहोर्नु छोरी–बुहारीको धर्म वा बाध्यता नै थियो ।
खेलेर बस्ने, रमाउने सानै उमेरमा नै बुहार्तनको कठोर पञ्जाभित्र जकडिएका आफ्ना छोरी–बुहारीलाई एक छाक भए पनि मीठो–मसिनो खुवाउन र केही दिनमात्र भए पनि रमाइलो गर्नकै लागि तीजको समयमा दर खाने चलन चलेको हो । यो त भयो पुरानो समयको कुरा, तर अहिलेका महिलालाई माइत जानका लागि कुनै चाडपर्वको आवश्यकता छैन । जुनसुकै समयमा पनि उनीहरु जहाँ पनि जानसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
आजको २१औँ शताब्दीको विज्ञान र प्र्रविधिले सहज र सरल बनाएको अवस्थामा र नारीले पनि आफ्नो अस्तित्व समाजमा पुरूषसरह नै बनाएकोले पनि उनीहरु कुनै पनि मामलामा पुरूषभन्दा कम नभएको प्रमाणित गरिसकेका छन् । यस अवस्थामा तीज मनाउनका लागि माइत नै जानुपर्ने अवस्था रहेको छैन । त्यसैले, आफ्नै घरमा पनि हर्षोल्लासका साथ परिवार, इष्टमित्र तथा साथीसङ्गीहरुका साथ मनाउन सकिन्छ । पहिलेको जस्तो संयुक्त परिवार नभएको र सानो परिवारमा आपूm, श्रीमान् र छोराछोरी मात्र परिवारमा रहने हुनाले आपूm माइत जाँदा परिवारका अन्य सदस्यहरुलाई व्यावहारिक असुविधा पर्ने पनि देखिन्छ । यसर्थ, यो समस्यालाई पनि बुझी तीजलाई मनाउनु महिलाहरुको पनि कर्तव्य हुन आउँछ ।
आजको यस युगलाई कुनै कुनै बूढापाकाहरुले नराम्रो मानेको देखिए्र पनि महिला उन्मुक्ति, स्वतन्त्रताको क्षेत्रमा पापी युग होइन, धार्मिक युग प्रारम्भ भएको छ । केही अपवाद छोडेर आज न पँधेरो जानुपर्छ, न घाँस–दाउरा खोज्न र गाईवस्तु चराउन जङ्गल जानुपर्छ, न त पहिलेको जस्तो बुहार्तन खेप्नुपर्छ, न त खानेकुरा नबचेको अवस्थामा भोकै सुत्नुपर्ने अवस्था नै छ । यसरी नै मीठो–मसिनो खानका लागि सासूससुराको कृपा बर्सिनुपर्छ, न त दराजको साँचो सासूबाट हात पार्नुपर्छ । आजका बुहारी घरका छोरीभन्दा प्यारा छन्, हकदार छन्, स्वावलम्बी छन्, सक्षम छन् । त्यसैले, उनीहरुलाई माइत गएर एक–दुई छाक मीठोमसिनो खाएर आफ्नो जीवन सबल भएको ठान्नुपर्ने अवस्था छैन ।
आजको परिवेशमा शिक्षा आर्जनदेखि हरेक क्षेत्रमा महिलाहरु पुरूषभन्दा बढी आरक्षित, सुखी र आरामदायी पनि छन् । आज उनीहरु दासीका रुपमा होइन, सम्मानित सहकर्मीको रुपमा उभिएका छन् । हिजो एउटै पुरूषले दसवटीसम्म सौता थुपारेर नारीमाथि थिचोमिचो गर्ने र यिनै अत्याचारी पुरूषको मृत्यु हुँदा इच्छा नहुँदानहुँदै पनि जबर्जस्ती सति जानुपर्ने अवस्था थियो । यसो हुनुमा आप्mनो मृत्युपछि आफ्नी श्रीमतीलाई अरुले नलैजाऊन् भन्ने थियो । यसो हुँदा आजको युगलाई सत्य युग, धार्मिक युगको रुपमा मान्नुपर्ने हुन्छ ।
आजभोलि तीजलाई मनाउने तरिकामा पनि धेरै परिवर्तन आएको छ । हिजो भएका अन्याय, अत्याचार, नारीमाथिको थिचोमिचो, विकृति, विसङ्गतिका बारेमा आजका नारीहरुले नारी उन्मुक्तिका बारेमा गीत गाउँदै, नाच्दै नारी चेतनाका क्षेत्रमा अझै जागरूकता ल्याउने लक्ष्य राखेको पाइन्छ । साथै, यसमा पाश्चात्य सभ्यता र संस्कृतिले जरो गाड्दै त्यहाँको नाङ्गो संस्कृतितिर आकृष्ट भएकोले हाम्रो मौलिक संस्कृतिका विपरीतका नाचगान र पोसाक पहिरिएको पनि देखिन्छ । हिजोआज महिनौँदिनअगाडिदेखि दर खाने नाममा विभिन्न पार्टी प्यालेसहरुमा महिलाहरुको भीडभाड हुने गरेको देखिन्छ ।
यसले हुँदाखाने वर्गमा नकारात्मक असर पर्ने र ऋण गरेर भए पनि चाडबाड मनाउने र भोलि ऋणको बोझले थिलथिलो बनाउने अवस्थाको सिर्जना भएको देखिन्छ । यसैले गर्दा सभ्य, शिष्ट र साधारण तरिकाले चाडपर्व मनाउनुपर्ने र देखासिकीको भावना त्यागेर आफ्नो क्षमता र आर्थिक अवस्थामा नकारात्मक असर नपर्ने गरी चाड मनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
पश्चिमा संस्कृतिको प्रभावमा परेर गरिने कार्यले भावी पुस्तामा कस्तो असर पर्ला ? हाम्रो स्वच्छ र सफा संस्कृतिको अवस्था कस्तो होला ? म हाम्रा सहृदयी महिला दिदीबहिनीहरुमा आग्रह गर्छु कि हाम्रो कार्यले कतै नारी जातिमाथि नै लज्जाको अनुभूति गर्नु नपरोस्, जसले गर्दा हिन्दु नारीहरुको महान् पर्व तीजमा नै कतै कालो धब्बा नलागोस् । यसका बारेमा हामी नारीहरु नै सचेत रहनुपर्छ, त्यसैले आफ्नो संस्कृति र सभ्यतालाई सदैव उच्च राख्न देखावटी र बनावटी रुपको व्यवहार नगरौँ, आफ्नो हैसियतलाई नबिर्सौं, सभ्य र संयमित बनौँ । हामी नारीहरु शालीनता र इज्जतको प्रतिमूर्ति हौँ, समाजका गौरव हौँ, गहना हौँ । यसैले समाजको केन्द्रबिन्दु महिलालाई कतैबाट पनि आक्षेप लाग्ने काम नगरौँ भन्ने कामना गर्दछु ।
अन्त्यमा, सम्पूर्ण हिन्दु नारीहरुको महान् पर्व हरितालिका तीजको अवसरमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना अर्पण गर्दछु ।